Europe's Top Luxurious Trains | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Oololiwe ngephambili Top eYurophu
Oololiwe ngephambili Top eYurophu
Uloliwe ohamba eScotland, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 10/04/2021)
Akunyanzelekanga ukuba ube umdlali Bollywood ukubona eneneni ngaphakathi ezi gorgeous, oololiwe ngephambili, kodwa awunalo ukumisela lesiqa isityhwentywe semali bucala ukuze bazonwabele. Ukuba ubukhe okungenani £ 3, 000+ onga, ukhethe indawo, pakisha izinto zakho, kwaye la mava obomi aqale! Yonke into ngale kuxubana kamnandi, intuthuzelo, kunye neninzi indawo bemvelo eYurophu uya kukwenzela awayengenakuyilibala.
Apha yiloo ngumkhokeli eYurophu ezintathu kakhulu ethandwa, oololiwe ngephambili.
A itreyini waqalisa abahambi kwihlabathi lukaloliwe akafikanga emva 1982 uloliwe efanayo ukuba nangoku inani elinye ukhetho ezininzi umhambi eYurophu kunye noololiwe Luxurious abalandeli. ke, kuye nabani na ojonge ukonwabela uloliwe ogqibeleleyo ngaphandle kokuthelekisa, Venice Simplon Orient Express yindlela yokwenza oko. Okuninzi uhambo odumileyo yale ukubaleka obutofotofo uphakathi London ne Venice. kunjalo, abaninzi abakwazi ukumelana kokuqhubeka ku Istanbul Berlin, nge Berlin ukuba indawo yokugcina usungule ukuba uloliwe. Xa ukhwela kuloliwe, unazo ezinye abapheki kakhulu ehlabathini usebenza kwi izidlo zakho kunye abandwendweli abangatshatanga kunye ezahlulwayo ziphatheka star-5.
Kunye imoto yokudlela lounge, kukho indawo bar kakuhle kunawo ukuba iindwendwe ... khm, abahambi. Xa ucinga iCrème de la iCrème koololiwe obutofotofo, Venice Simplon Orient Express kulapho ingqondo yakho ngoko nangoko iya!
Venice ukuba London itikiti liya kukudla malini na malunga £ 2,700. Le hambo kuthatha ezinye 16 iiyure.
Bolzano eVenice Uqeqesha
Vienna eVenice Uqeqesha
Udine eVenice Uqeqesha
Belmond Royal Scotsman Uqeqesha obutofotofo
A itreyini ngokwenene ngokuvume- izithethe royal, IBelmond Royal Scotsman iyi iphupha lizaliseka. Ukuba phakathi phezulu 3 oololiwe ngephambili, Belmond iye spiral nemizila ozakuzithanda. ezi zibandakanya YeScotch Malt iwhisky Trail, Wonders Western Ehle, Scotland kaThixo Classic Splendours, neentlambo Lakes & Gardens, kunye nokunye okuninzi. Belmond uqhosha iinkonzo Spa, njengokuba! Usuku-4 Highland Classicmost i uhambo kakhulu ethandwa. Lo loliwe esisuka UTshazimpuzi ku October, babugubungela yembonakalo ezininzi ngokuphelele langa ezibukekayo, kubandakanywa i-Isle of Skye. Hlala ukhululeke yi iglasi windows enkulu, simunce ezinye aphambili kwaye zityityizele phezu wobuhle Scotland.
Amaxabiso amatikiti ukuqala kwi £ 2.350 umntu ngamnye.
I-Golden Eagle iDanube Express Oololiwe abaXhamlileyo
Niya kuphinda eYurophu ngendlela ubuya ukuhamba i Golden Eagle weDanube Express. Uloliwe iyazingca phezu abandwendweli ngokumangalisayo obutofotofo, angafika namagugu tile. Kwakhona endiqhayisa lwezindlu the best yokutya kunye bar lounge enamavili. Eyona omnye kakhulu oololiwe ngephambili uya kuze Wamkhwelisa unikeza Golden Eagle iDanube Express 5 ukuba 12 uhambo kwiintsuku '. Igubungela inani eziya kubandakanya Budapest, Prague, Zurich, Vienna, Venice, Istanbul, Innsbruck, Sofia, kunye nezinye ezininzi. Kukho kwakhona inala nezinye iindawo (ukhenketho) ukuba ukhethe kusuka. Zonke uhambo Golden Eagle iDanube Express zibandakanya ukhenketho off-ngololiwe kunye namava.
Amatikiti le ekuqaleni enye £ 22.260 kuba Superior Deluxe Class.
Uhambo oluya eYurophu lubandakanya oololiwe abaXhamlileyo kunye nolonwabo ngokwalo, kodwa uhambo oluya eYurophu nakweyiphi na kwezi loliwe YONKE. Thenga itikiti nangaluphi na uhambo ngololiwe ukusuka kwindawo ukuya kwindawo ukuya kuyo Gcina A Isitimela kwaye uqale yokuchitha Europe.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi asinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye ungakwazi apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha iilwimi / ja ukuba / fr okanye / de yaye ngaphezulu.
#ezibizayo #Uyolo #traveleurope isiseko train Travel uhambo ngololiwe
UK Train Ride Amaxabiso Uthelekiswa Europe Train Amaxabiso
Uhambo loLoliwe, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Best umdla kakhulu EYurophu
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe